Gburugburu aka njikwa
Anti-nchara ABS casing
Down ka -5 ℃ ọrụ
WiFi APP akara
Automatic defrost site okirikiri nloghachi
Kpara akpa titanium okpomọkụ Exchanger
Ruo ugboro 13 payback
Mgbe enwe ọdọ mmiri okpomọkụ na ọtụtụ n'ime ọdọ mmiri oge, Mr. Smart na-agba ọsọ na ala na-agba nke na-eduga ndị kasị mma ike ịzọpụta arụmọrụ ma super nkịtị ọdọ mmiri gburugburu ebe obibi. The Cop bụ ruo 13. Ọ bụ abụọ ume ịzọpụta karịa On / Off okpomọkụ mgbapụta.
Nkasi Obi nkịtị
Soft mmalite & obosara voltaji ngwa
Na stepless DC inverter Compressor, Mr. Smart-amalite site 0 Amps ka gosiri Amps nwayọọ nwayọọ & nwayọọ nwayọọ. E nweghị iku n'ụlọ ọkụ eletrik usoro. Na na ya smart akakabarede, Mr. Smart nwere ike etinyere a dịgasị iche iche nke voltaji nke bụ 180V ~ 260V.
Mr.Smart nwere ike etinyere na R32 ma ọ bụ R410A gas.
Ugboro 10 mgbanwe kpatụ gas eruba na-amụba Cop site ruo 20%.
40% elu arụmọrụ karịa nkịtị titanium okpomọkụ Exchanger.
Smart WiFi akara (Nhọrọ)
Na APP akara, ị nwere ike ịlele ma ọ bụ na-achịkwa gị Mr. Smart n'ebe nile.
Na Saginomiya 4-ụzọ valvụ maka ngwa & oru oma deforesting.
Ezubere maka ala Air -5 ℃ ọrụ.
Arụmọrụ ọnọdụ: Air 27 ° C / Mmiri 27 ° C / iru mmiri. 80%
Heating ikike (kW) 7.0 9.0 13,0 16,0 20.2 24.2
cop iche 13~6.3 13.2~6.4 13.5~6.5 13.5~6.4 13.5~6.3 13.8~6.5
Nkezi Cop na 50% Speed 9 9.6 9.8 9.5 9.6 9.6
Arụmọrụ ọnọdụ: Air 15 ° C / Mmiri 26 ° C / iru mmiri. 70%
Heating ikike (kW) 5.0 6.5 9.0 11,0 14.0 16,0
cop iche 6.8~4.6 6.9~4.5 7~4.7 7~4.5 7~4.5 7.2~4.8
Nkezi Cop na 50% Speed 6.3 6.3 6.4 6.2 6.2 6.4
Dụrụ ọdọ mmiri olu (m 3 ) * 15 ~ 30 20 ~ 45 35 ~ 65 40 ~ 75 50 ~ 90 60 ~ 110
Ịwa ikuku okpomọkụ ( ℃ ) -5 ℃ ~ 43 ℃
okpomọkụ Exchanger Kpara akpa Titanium Okpomọkụ Exchanger
Ịnye ọkụ 230V 1Ph
Gosiri input ike (kW) 0.20~1.09 0.26~1.44 0.34~1.91 0.44~2.44 0.56~3.11 0.60~3.33
Ọsọ ọsọ ike na 50% Speed ​​(kW) 0.4 0.52 0.7 0.89 1.13 1.25
Gosiri input ugbu a (A) 0.85~4.73 1.13~6.28 1.50~8.33 1.91~10.63 2.43~13.53 2.61~14.49
Oke input ugbu a (A) 6.5 8 12.5 17 19,5 /
Sound larịị na 1m dB (A) 37,8 ~ 49,2 39,6 ~ 51,5 41,9 ~ 52,0 44,2 ~ 55,3 44,3 ~ 56,1 44,9 ~ 56,7
Sound larịị site 50% ọsọ 1m dB (A) 41,8 44,8 47,5 47,7 48,6 49.1
Sound larịị na 10m dB (A) 17.8 ~ 29,2 19,6 ~ 31,5 21.9 ~ 32 24,2 ~ 35,3 24,3 ~ 36,1 24,9 ~ 36,7
Dụrụ mmiri agbanwe agbanwe oge (m³ / h) 2 ~ 4 3 ~ 5 4 ~ 6 6 ~ 8 7 ~ 10 10 ~ 12
Water njikọ (mm) 50
* The data n'elu bụ nanị maka akwụkwọ. N'ihi na ụfọdụ data, biko rụtụ aka na nameplate na unit.
* gwara ọdọ mmiri olu na-emetụta a onwe ọdọ mmiri na isothermal cover, si April ka September.
Full Inverter Igwu Pool Okpomọkụ mgbapụta